Ụlọ elu Ụlọ elu dị elu maka ụlọ ahịa - Atụmatụ dị mma | Achọpụtara nke ọma
Home » Ndepụta » Ụlọ elu Ụlọ elu nke elu-igwe maka ire ere - Atụmatụ dị mma
Sq Na: 4270
Belle Glade - Ụlọ Nlekọta Elu Ụlọ Elu
Lee anya n'ebe ugwu, n'ebe ndịda, n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ọdịda anyanwụ, windo dị maka anya gị. N'ihe dị ka elekere 4850 ụkwụ, ikuku dị jụụ ma na-agba ume. Kwa ụbọchị, ọhụụ ọhụrụ, ebe ọwụwa anyanwụ, anyanwụ ọdịda anyanwụ, na igwe ojii na-asọ asọ n'etiti ugwu elu dị n'okpuru.
Mmiri site na Fall na-egosi ihe kacha mma dị ka ubi na-agbawa agba agba. Onye nwe ya, bụ onye na-ahụ maka ebe obibi nke Busch Gardens ruo ọtụtụ afọ, kere paradaịs botanical na 1500 ụkwụ nke mgbidi nkume, oche na ụzọ ga-enwe ụdị hydrangeas 15, ụdị osisi osisi 29, 30,000 daylilies, hey hey, hydrangeas, na ihe ndị ọzọ na-atụ anya ya.
Contemporary in design, echiche mara mma nke Oké Ugwu Ugwu n'ụzọ niile na Tennessee bụ ebe etiti ọ bụla n'ime ụlọ. Ulo na akwapu otutu ulo na-eme ka obi di ya.
Ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-enye aka gụnyere nnukwu kichin buru ibu nke nwere ọnụ ụlọ granite na osisi dị mma. Okpokoro na-emeghe ka ime ụlọ ahụ na nnukwu ọkụ Buck Stove na-ekpuchi ọkụ nke na-ekpuchi ikuku na-ekpuchi n'elu ikuku nkume na ebe dị elu. E nwere nnukwu ụlọ nna ukwu na akwa batrị buru ibu na mmiri jetted na mmiri dị iche iche nke marble Kọrint, ndị mara mma osisi niile, na ụgbọ mmiri okomoko mara mma. Dịka na ọtụtụ n'ime ụlọ ahụ, echiche sitere na ụlọ na-asa akwa na ịsa ahụ bụ ụdọ-idobe.
E nwere ọtụtụ ọnụ ụzọ ụlọ ahụ. Otu ogige mara mma na-enye mmadụ ohere inweta ala nke na-agụnye nnukwu ụlọ egwuregwu na-achịkwa tebụl billiards nke ndị Ministota Fats na-akọchabu. Ebe obibi ime ụlọ nke abụọ na nnukwu Buck Stove nnukwu ọkụ na-ere ọkụ na nnukwu ụlọ ezumike nke abụọ na-aga n'ọdụ ụgbọ ala.
Jiri ọnụahịa ụtụ isi nke $ 562,400 dị ọnụ ala!
Ị ga-ahụ ụlọ a dị elu, nke dị elu, elu ugwu nke NC na 3.32 mara mma acres naanị 35 nkeji si Asheville, NC.
Ị nwere ihe pụrụ iche na-ere?
Ahịa: $ 514,500
Okwu: 947 Windswept Ridge Rd
Koodu mpaghara: 28716
Afọ Wuru: 1985
Ụkwụ Square: 4270
Ụlọ ịwụ ahụ: 2
Financial: Ọnụahịa ọnụahịa ụtụ ọnụ. Ntụle ụtụ nke 2017 bụ $ 562,400.
Nke gara agaEcho - Ugwu Green ModernIhe na-esoteNC Mountain Cabin, dị ka New - 18.5 Acres
Echo - Ugwu Green Modern